Dawlada China oo Ciqaab Adag marisay Dad badan oo Muslimiin ah. – GOBOLADA.COM
May 24, 2022 May 24, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Dawlada China oo Ciqaab Adag marisay Dad badan oo Muslimiin ah.
Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay ugu yaraan 630 Imaam tani iyo 2014-kii howlgallo ay ka wadeen gobolka Xinjiang, sida lagu sheegay cilmi-baaris cusub oo ay sameysay koox u doodda Xuquuqda qowmiyadda Uyghur.
Inta badan culimada iyo Imaamyada u xiran xukumadda Beijing waxa lagu soo oogay dacwad la xiriirta’iney xagjirnimada faafinayeen’, ‘carqaladeynta nidaamka bulshada’, iyo ‘abaabul gooni-u goosad.’
Hase yeeshee ehelada Imaamyadu waxay sheegayaan waxa loo haysto iney tahay oo keli ah Muslimiinta oo ay wacdiyeen, waxbaridda ducaadda iyo iney masaajidda Imaamyo ka noqdeen.
Kooxdan u doodda xuquuqda qowmiyadda Uyghur waxaa kale oo ay sheegeen culimada Muslimiinta oo ay tiradooda kor u dhaafeyso 1,046 oo ay intooda badan yihiin Muslimiinta Uygure iney xabsiyada dowladda Shiinaha ku jiraan. Tiradaasi oo ay kooxdu sheegeen iney ka soo xigteen dokumantiyada maxkamadaha, marag furka qoysaskooda iyo xogta dadweynaha ay ka soo uruuriyeen.
630-ka wadaad ee muddada gacanta lagu hayay 304 ka mid ah waxaa loo diray xabsi, tallaabadaas oo kasoo horjeedda ololaha dowladda ee “dib wax u barista” oo laga sameeyo xeryo ay hayadaha xuquuqda u dooda ku qeexeen in dowladda Shiinaha ay ku xareyso Muslimiinta Uyghur.
Dowladda Shiinaha waxay difaacday xeryaha lagu xiray dadka, iyadoo sheegtay in ay yihiin kuwo ku meel gaar ah “oo wax lagu barto” si looga hortago falalka argagixisanimada iyo xagjirnimada dhinaca diinta.
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo ku xigeenkiisa oo la kulmay Danjiraha Dawlada Qadar u Fadhiya Soomaaliya
Ergayga Gurmadka Abaaraha oo maanta gaaray Degmda Buulo Barde ee gobolka Hiiraan